MacOS High Sierra ichave yekupedzisira vhezheni ye macOS inoenderana ne32-bit application | Ndinobva mac
Kuburitswa kweIOS 11 ndiko kutanga kwekuguma kwezvikumbiro izvo zvisati zvasimudzirwa kuita 64-bit processor nhasi. Apple yanga ichimanikidza nharaunda ino kweanoverengeka makore kuti maapplication ayo aenderane nerudzi urwu rwema processor, asi zvinoita sekunge kwete chete kuti inoda kuti maapplication eIOS aenderane nema64-bit processor, asi ikozvino yave nguva yavo macOS ecosystem. Ivo vakomana vanobva kuCupertino vatanga kutumira email kune vanogadzira application vachivayeuchidza nezve kudiwa kweku simudzira maapplication ako kune makumi matanhatu neshanu mapurosesa, sekureba sekuda kwavo kuve varipo muMac App Store.
Asi Apple yakaburitsawo pane blog kune vanogadzira iwo mazuva ekugadzirisa ekushandisa. Kubva muna Ndira 2018, ese maapplication matsva akaendeswa kuMac App Store anozofanirwa kupa rutsigiro rwema64-bit processor. Kubva muna Chikumi 2018, zvese zvikumbiro zvakaunzwa kuMac App Store yekuvandudza zvinoda zvakare kuchinjirwa kune makumi matanhatu neshanu ma processor. Muchirevo chimwe chete, Apple inokurudzira kuti vagadziri vanopa maapplication avo kunze kweApp Store, kuti iyo adapt kuti vagone kuenderera mberi vachishanda mune inotevera vhezheni ye macOS.
Sekureva kwaApple, High Sierra ichave yekupedzisira vhezheni iyo inobvumidza 32-bit kunyorera kuti kumhanyiswe pasina kuenderana matambudziko, Asi nekuuya kweshanduro inotevera ye macOS, Apple haizopa rutsigiro rwemhando idzi dzekushandisa, saka mashandiro ayo anotanga kusagadzikana sezvazviri nhasi. Vakomana vanobva kuCupertino vakaburitswa nezuro, mushure memwedzi yakawanda yekumirira, yekutanga beta yeMacOS High Sierra, inotevera vhezheni yeanoshanda system yeApple Mac makomputa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS High Sierra ichave yekupedzisira vhezheni ye macOS inoenderana ne32-bit application
Nakidzwa neanonyudza emumhanzi chiitiko neBoom 3D yeMac
Lisa Jackson anoenda kunopedza kudzidza kwekutanga kusimudzira kweVagadziri kuApple Chitoro muNaples.